Xasan Cali kheyre oo ku dhawaaqay in dib loo dhigay banaanbixii Bari oo Jimco ahaa.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xasan Cali kheyre oo ku dhawaaqay in dib loo dhigay banaanbixii Bari...
Xasan Cali kheyre oo ku dhawaaqay in dib loo dhigay banaanbixii Bari oo Jimco ahaa..
Raisal wasaarihii hore ee Somaliya Xasan cali kheyre kana mid ah Musharixiinta Mucaaradka ayaa goor dhawayd Markii uu soo idlaaday shirkii u socday Musharixiinta iyo Rooble ku dhawaaqay in uu baaqday Banaanbixii Bari lagu balansanaa.
Kheyre oo la hadlayay taagerayaashiisa ayaa u sheegay in meel aan banaanbax lagu qaban Karin aan doorasho xor ah oo xalaal ah lagu qaban Karin.
“ Hadii banaanbax lagu dhigi waayo dalkaan, uma malaynaayo in Doorasho ay ka dhici karta waxaa lagu tumanaa dastuurkii, waxaan soo bixo doonaa anaga oo kumanaan ah, Marka dalkan in doorasho ay ka dhacdo waa xaq qof looga Ganbanaayana ma jirto”ayuu yiri kheyre oo la hadlayay taageerayaashiisa.
Sidoo kale hadalka kheyre ayaa ku soo aadaya Xili uusan galabta ka qeyb galin shirkii ka dhacay Hotel Decale ee agagaarka garoonka Muqdisho ay iskugu yimaadeen Musharixiinta iyo Xukuumada uu Hogaamiyo Rooble.
Previous articleWasaaradda Caafimaadka oo sheegtay in la diiwaan geliyay 138 xaalado cusub oo COVID-19 ah 24-kii saac ee la soo dhaafay
Next articleQoraal xalay ka soo baxay beesha caalamka oo lagu soo dhaweeyey heshiiskii xukuumadda iyo golaha midowga musharaxiinta
Baarlamaanka kulankiisa oo loo xayiran yahay buuxsanka Kooramka
Qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ku sugan xarunta Villa Hargeysa iyagoo sugaya khudbadda la filayo in madaxweyne Farmaajo, ujeediyo labada Aqal. Farmaajo, ayaa...
Siyaasiyiin loo haysto lacag ay ku lunsadeen aaskii Mandela
Darawal gaari Xamuul ah oo Lagu Dilay Xalay duleedka Magaalada Caabudwaaq...
Qaraxyo Alshabaab ciidamada Itoobiya kula eegteen wadada dheer ee xiriirisa degmooyinka...
Ahmed Madoobe oo kulan araga Fog la qaatay beesha Caalamka
Ciidamada Dowlada oo dilay Gudoomitah degmada hodan
Guddoomiyaha Gobolka Hiiran Cali jeyte oo ku sii jeeda degmada Buulo-Burde...